Giorgio Chiellini: Marka uu Conte ku Tababarayo, ma daali kartid, Balse waad Dhiman Kartaa!!
Thursday, January 24th, 2019 - 09:21:09
Wednesday February 07, 2018 - 22:16:33 in Wararka by Muuse Cabdi
Giorgio Chiellini ayaa Afkiisa kala furay, wuxuuna ka hadlay waxa uu la gaarka yahay macallinkii hore ee kooxda Juventus, Talyaanigana ay sidoo kale wadajir uga soo wada shaqeeyeen, Antonio Conte hoggaamiyaha Waqtigaan ee kooxda Chelsea.
Chiellini ayaa sheegay in Morata uu wax badan ka ogyahay Arrimaha Conte, maaddaama aysan aheyn waxa uu sameeyo Tababar — waan ku faraxsanahay in aan la shaqeeyay macallin la mid ah Conte oo tababarkiisa aan lagu daali jirin, balse lagu dhiman karay.
Wuxuu shaaciyay laacibka xulka Talyaaniga in aan loo Adkeysan Karin, tababarka Conte, wuxuuna yahay mid aan Aqoonin daal, balse garanaya uun in la geeriyoodo ama inta laga dhimanayo la socdo la Ordo oo la ciyaaro.
Wuxuu sidoo kale Ammaanay laacibkani Harry Kane xilli ay is wajahayaan Tottenham iyo kooxdiisa ee Champions League kaasoo ka mid ah wareegga 16-ka ee tartanka kooxaha Yurub.